होमपेज / विश्व / विचार / नेपाल–चीनबीचका ७ नाका
नेपाल–चीनबीचका ७ नाका	18 Nov 2015 बुधबार २ मंसिर, २०७२
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेपछि चीनले नेपालसँग आयात–निर्यात सहज बनाउन थप ७ वटा सीमानाका खुलाउन सहमति जनाएको छ । यी नाका सञ्चालनमा ल्याउने सिलसिलामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत नेपाल–चीनबीच हालै २० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । चीनतर्फका नाकाहरू खुलाउन र ती नाका जोड्ने सडकहरूको गुणस्तर बढाउन तत्कालै स्थलगतरूपमै कार्य प्रारम्भ गर्नसमेत व्यवस्थापिका संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । चीनसँग व्यापार वाणिज्य कारोबार गर्न निकै पहिलेदेखि कोदारी–खासा र केही अघिदेखि रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालनमा रहेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति अब खोलिने ७ नाका ओलाङचुङगोला, किमाथांका, लामाबगर, लार्के, कोरोला, नग्चा र हिल्सा रहेका छन् । यी ७ नाकाको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक वातावरण, आवतजावत परिस्थिति केकस्तो अवस्थामा रहेका छन्, त्यसको लेखाजोखा यस लेखमा गर्ने प्रयास गरेको छु ।ओलाङचुङगोलाः ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट ओलाङचुङगोला भएर तामाकोसीको तिरैतिर सीमानाका टिपताला भञ्ज्याङ पुगिन्छ । यसको दूरी करिब ९५ किलोमिटर छ । टिपतालानजिकै चीन(तिब्बत) को भूभाग सिङ्म्यागाजे हो । यहाँबाट चीनको रिवा बजार जोड्ने २२ किमी ग्राभेल सडक रहेको छ । गाडीमा लगभग डेढ घन्टामा रिवा पुगिन्छ । रिवाबाट डिङ्गे, झानझोमको पक्की सडक हुँदै सिगात्सेमा रेल भेटिन्छ । यहाँबाट रेलमार्गद्वारा ल्हासा तथा चीनको अन्य भाग पुग्न सुगम छ ।नेपालतर्फ भने झापाको काकडभिट्टाबाट आएको सडक फुङलिङ सुकेटारसम्म पुगेको छ । अधिकांश सडक कच्ची छ । सडकले फुङलिङलाई टिपताला भञ्ज्याङसँग जोड्न सकेको छैन । यद्यपि, सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ । यो सडक बनिसकेपछि मेची राजमार्गले काकडभिट्टापूर्व भारतको पानीट्यांकीलाई चीनको रिवा बजार जोड्ने छ । यो सडकको लम्बाइ करिब ३ सय ६० किलोमिटर हुनेछ । यसै सडक भद्रपुर हुँदै भारतको गलगलिया रेलवे स्टेसनमा पनि जोडिन सक्छ । टिपताल भञ्ज्याङ सीमानाका ५ हजार ९५ मिटर अग्लो भएकोले हिउँद्मा हिउँ पर्छ । यसैले हिउँद्मा यातायात आवागमनमा वाधा पर्न सक्छ । हिजोआज सतहमार्गबाहेक सुरुङमार्ग प्रविधिवाट पनि सडक निर्माण गर्न सकिने भएकोले नयाँ प्रविधि अपनाइए बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनसक्छ ।किमाथांकाः संखुवासभा जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट अरुण नदीको किनारैकिनार बन्ने सडक मार्गले सीमामा रहेको किमाथांका नाका हुँदै तिब्बतको सीमावर्ती वस्ती लेङ्दुप/च्यांगा छुन पुग्छ । लेङ्दुपबाट ३० किमी कच्ची सडकद्वारा रिवा बजार जोडिएको छ । रिवा बजार पुगेपछि पक्की सडक र रेलमार्गद्वारा चीनको जुनसुकै भागमा जान–आउन सकिन्छ । नेपालतर्फ विराटनगरबाट धनकुटा–हिलेसम्म पक्की सडक छ । धनकुटा लेगुवाघाटबाट खाँदबारीसम्म जेनतेन कच्ची सडक जोडिएको छ । यहाँबाट किमाथांका सीमानाकातर्फको १ सय १३ किमी सडक बन्न सुरु भएको छ । तर, कहिले पूरा हुने हो भन्न सकिन्न । यो सडक निर्माण भइसकेपछि २ सय ८१ किमी लामो कोसी राजमार्गले चीनको रिवा बजार र भारतको जोगबनी जोड्नेछ । हालै ७ वटा नाका खोल्ने सहमति भएमध्ये यो सीमानाका अरुण नदी घाँटीमा भएकोले टिपतालाभन्दा होचो अर्थात् २ हजार २ सय ४८ मिटरको उचाइमा रहेको छ । त्यसैले हिउँद्मा पनि व्यापार वाणिज्य सञ्चालन गर्न वाधा पर्दैन ।लामाबगरः दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोटनजिकै तामाकोसीबाट उत्तरतर्फ तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जान लामाबगरसम्म ६८ किमी कच्चीसडक बनेको छ । लामाबगरबाट उत्तर लाप्चिपुल र त्यसपछि जुम खोलैखोला पूर्वतर्फ मोडिएर सीमाखम्बा नं. ५१ नजिकसम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रस्तावित सडक लगभग ३१ किमी हुनेछ । तिब्बततर्फको फलेकबाट नेपालको सीमा आउन पैदल बाटोमात्र छ । तर, फलेकबाट मोटर सडक सुरु भई रोङ्सार, गांग्या बजार, टिङ्री, चापु हुँदै सिगात्से, ल्हासा जोडिएको छ । नेपालतर्फ चरिकोटबाट तामाकोसी खोलैखोला दक्षिणतर्फ सडक निर्माण गरी त्यसलाई बीपी राजमार्गमा जोडेर अन्ततः जनकपुर, जलेश्वर हुँदै भारतको भिठामोड छुनपुग्छ । यसबाट चीनको फलेक र भारतको भिठामोडबीच सडकसम्पर्क हुनसक्छ । यो सडक करिब २ सय ४० किमी लामो हुनेछ । लामाबगरबाट सीमाको जुम खोला नजिकैसम्म १ किमी सुरुङमार्ग बनाइएमा चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो २ सय २० किमीको सडक हुनेछ । स्मरणीय छ, यो सडक नै नेपाल भएर भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको हुनेछ । किमाथांका–जोगबनी सडकचाहीँ दोस्रो छोटो हुनेछ । लामाबगर सडकको सबैभन्दा अग्लो भाग २ हजार ५० मिटर छ । त्यसैले यो मार्ग बाह्रै महिना सञ्चालन हुनमा मौसमले वाधा पार्दैन ।गोरखा लार्केः लार्के नाकाबाट सडक यातायात खुलाउन गोरखा सदरमुकमबाट उत्तर दरौँदी खोला किनार हुँदै बारपाक र लाप्राकनजिकबाट बुढीगन्डकी खोलैखोला सामागाउँ छोएर लार्केको लज्याङ भञ्ज्याङसम्म सडक पु¥याउनु आवश्यक पर्छ । यो प्रस्तावित सडकको लम्बाइ करिब १ सय ५० किमी रहने छ । सडकको सबैभन्दा अग्लो भूभाग ५ हजार ९८ मिटर रहेको छ । लार्केबाट तिब्बततर्फको कुङ्टाङ बजार पुग्न १५ किमी पैदल बाटो र ४५ किमी पक्की सडक रहेको छ । यो सडकले झोङ्बा सहरमा ल्हासा राजमार्ग भेटेको छ । गोरखाबाट चीनको नाका जोड्ने अर्को सम्भावित वैकल्पिक मार्ग पनि रहेको छ । यो मार्ग बूढीगन्डकी किनारको लुकुवाबाट छेकम्पार हुँदै थाप्ले भञ्ज्याङ पु¥याएर तिब्बत जोड्न सकिन्छ । यसको लम्बाइ लगभग १ सय ४० किमी हुन्छ । अधिकतम उचाइ ५ हजार १ सय ४ मिटरको भूभाग भएर गोरखा लार्के सडक जाने भएकोले हिउँद्मा यातायातका साधन ल्याउन–लैजान अप्ठेरो खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।नेपालतर्फ गोरखाबाट दक्षिण मुगलिङ, नारायणघाट, भरतपुरसम्म ६० किमी पक्की सडक छ । यसपछि यस सडकलाई पूर्वको वीरगन्ज तथा पश्चिमको बुटवलतर्फ नबढाइ दक्षिणतर्फ माडी उपत्यका र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भारतसँगको सीमानाका भिखनाठोरी जोडिए यसको आफ्नै ठूलो महŒव रहनेछ । नारायणघाटदेखि ठोरीसम्म २ सय १० किमी कच्ची सडक रहेको छ र बस सेवा पनि सञ्चालित छ । लार्केदेखि ठोरीसम्मको सडक मार्गको बाँकी खण्ड निर्माण पूरा भएपछि यसको लम्बाइ करिब ४ सय २० किमी हुनेछ । यस सडकसम्बन्धी महŒवपूर्ण कुरा के छ भने, लार्के नाकाबाट तिब्बत जोड्ने सडक खुलेमा यसले भारतको भिखनाठोरी रेलवे लाइन भेट्टाउने छ । ४ दशकअघिसम्म भिखनाठोरी नेपालको ठोरी हुँदै पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा नून, तेल तथा आवश्यकीय सामान ल्याउने मुख्य नाका थियो । अहिल्यै पनि ठोरी नाका निकै चल्तीमा छ ।मुस्ताङः रुपन्देही जिल्लाको नेपाल–भारत(बेल्ही–सुनौली) नाकाबाट सुरु भएको राजमार्ग बुटवल, पोखरा, कुश्मा, बागलुङ, बेनी, जोमसोम, लोमान्थाङ हुँदै नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ नं. २४ कोरोला नाका पुगेको छ । कोरोलाबाट तिब्वततर्फ लिजी हुँदै झोङ्बा सहर जोडिएको छ । झोङ्बा पुगेपछि चीनको जतासुकै जान सुगम छ । यो सडक ४ सय ४८ किमी लामो छ । बेनी–कोरोला खण्डमा कच्ची सडक छ भने बाँकी पक्की राजमार्ग छ । सवारी साधन सञ्चालनमा आइसकेको छ । यो सडकको अधिकतम उचाइ ४ हजार ८ सय ७१ मिटर भएकोले उपल्लो मुस्ताङको हिउँदे मौसममा हिउँ पर्ने र तल्लो म्याग्दी क्षेत्रमा वर्षायाममा बाढीपहिरो आउने हुँदा केही समय सडक अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । पश्चिम नेपालमा चिनियाँ सामान सस्तो दरमा ढुवानी गर्न यो नाका निकै फाइदाजनक हुनसक्छ ।मुगु नग्चाः नेपालगन्जबाट उत्तर लागेको सडक वीरेन्द्रनगर, दैलेख, मान्म, जुम्लाकोटदेखि सिनिया खोला हुँदै भैगाउँबाट गमगढी पुग्नसक्छ । दैलेखसम्म पक्की सडक बनिसकेको छ । त्यसपछि जुम्लाकोटसम्म कच्ची सडक रहेको छ । यहाँदेखि गमगढीसम्मको सडक निर्माणाधीन छ । गमगढीदेखि मुगु कर्णाली खोलैखोला मुगुगाउँको नेपाल–चीन सीमानाका नग्चासम्मको सडक प्रस्तावित अवस्थामा छ । नग्चा सीमाबाट तिब्बतको ह्याजिमाङ पुग्न २१ किमी पैदल हिँड्नुपर्छ । त्यसपछि ल्हासा राजमार्गमा रहेको होर्बा सहर पुग्न पैदल बाटो रहेको छ । होर्बा पुगेपछि व्यापारका लागि जताततै जान सडक सुविधा छ ।नेपालगन्जबाट सीमानाका नग्चा पुग्न पक्की–कच्ची र प्रस्तावित सडकसमेत गरी करिब ३ सय ७४ किमी रहेको छ । सबैभन्दा अग्लो भूभाग ६ हजार ४ सय ९५ मिटर छ । गमगढीदेखि सीमासम्मको प्रस्तावित सडक निर्माण निकै कठिन अवस्थामा रहेको र लामो समय लाग्ने सम्भावना छ । यो सडक निर्माण पूरा भएपछि नेपालगन्ज–रुपैडिया सीमानाका चीनको ह्याजिमाङ सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिने छ ।हुम्लाः धनगढीबाट उत्तर सोझिएको सडक पक्की–कच्ची गरेर डडेलधुरानजिक हुँदै दिपायल, साँफेबगर, मार्तडीसम्म पुगेको छ । अब मार्तडीबाट कोल्टी, दमोलिगोठ र गोम्बा हुँदै सिमीकोटसम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सिमीकोटबाट चीनको सीमानाका हिल्सा जोड्न सडक रेखांकन गरिएको छ । हिल्साबाट तिब्बतकोे बजार शेरा १९ किमी टाढा छ । शेराबाट तिन्चु र कोक्र्याग हुँदै तिब्बतको पुरानो सहर ताक्लाकोट पुगिन्छ । ताक्लाकोटबाट मानसरोबर र राक्षस तालको बीच भएर ल्हासा राजमार्गको बागाग भेटिन्छ । चीनले हिल्सा सीमानाकासम्म नै पक्की सडक निर्माण गरिसकेको छ । हिल्साबाट सिमीकोटतर्फ पर्ने ९० किमी सडकमध्ये ४५ किमी निर्माण भई अरु काम अगाडि बढिरहेको छ । हिल्सा–धनगढी सडक मार्गको लम्बाइ लगभग ४ सय ७३ किमी हुनेछ । यस मार्गको सबैभन्दा अग्लो भाग हिल्सा ५ हजार ९२ मिटर अग्लो रहेको छ । यतिका उचाइबाट गुज्रने सडक भए तापनि हिउँद्मा समेत आवागमन गर्न खासै कठिनाइ पर्ने देखिँदैन । यो मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि यसले चीनको ताक्लाकोटलाई भारतको गौरिफन्टा बजार जोड्ने छ ।अन्त्यमा,नेपाल र चीनबीच थप नाका खोल्न लागिएको उल्लिखित ७ नाकामध्ये सबैभन्दा छोटो र कम उचाइबाट गुज्रने सडक लामाबगर मार्ग नै हो । तर, पूर्वी नेपालको चीनसँग व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति किमाथांका मार्ग फाइदाजनक देखिन्छ । यसले नेपालका धेरै व्यापारिक बजारलाई छुँदै भारतको ब्रोडगेज रेलवे स्टेसन जोगबनीलाई जोडेको छ । पश्चिम नेपालका लागि मुस्ताङ मार्ग नै बढी फाइदाजनक देखिन्छ । यो सडकमा यातायातका साधन चल्न सुरु भइसकेको छ । अहिले भारतले नाकाबन्दी गरिरहेका बेला चीनतर्फबाट यसै मार्ग भएर इन्धन, पेट्रोल, ग्यास तथा अन्य सामान सस्तो ढुवानीमा जोमसोम, बेनी, बागलुङ ल्याउने गरिएको छ । स्मरणीय छ, कोदारी–खासा र रसुवागढी–केरुङ नाका औपचारिक व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेका छन् भने मुस्ताङ नाकाबाट अनौपचारिक व्यापार गर्ने गरिएको छ ।गोरखा लार्केको सामागाउँ र छेकम्पार उत्तरको नाका स्थानीय सर्वसाधारणका निम्ति उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न तिब्बती बजार आउजाउ गर्न सुगम छ । तिब्बतको स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष दुईपटक करिब एक महिनाका लागि नाका खोल्ने गर्छ । यसपटक पनि असोज–कात्तिक महिनाका लागि खुलेको छ । सुदूर पश्चिमका लागि हुम्ला मार्ग उपयोगी हुनसक्छ । यो सडक तिब्बतको पुरानो बजार ताक्लाकोटसँग जोडिएको छ । अहिले नाकाबन्दीको समयमा ताक्लाकोटबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा आवश्यकीय दैनिक उपभोग्य सामान सडक मार्ग तथा पैदलै सिमीकोटतर्फ ल्याइने गरेको छ । सिमीकोट सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन चाहिने डिजेल चीनले दिँदै आएको छ ।ओलाङचुङगोला सडक नेपालको सुदूर पूर्व–उत्तर भेगका जनताका निम्ति तिब्बतबाट अत्यावश्यकीय सामान ल्याउन र स्थानीय उत्पादन तिब्बती बजार पु¥याउन सजिलो पर्छ । तर, यसको महŒव किमाथांका र लामाबगर सडकभन्दा कम रहेको छ । मुगुबाट खोलिने नाका मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका निम्ति लक्षित भए पनि कठिन मार्ग भएकोले चाहेजति मात्रामा उपयोग र प्रयोगमा आउन सक्ने देखिँदैन । यस क्षेत्रका वासिन्दाले हुम्ला मार्गबाटै फाइदा लिन सक्छन् ।उल्लिखित नाका खोल्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर, नेपाल आत्मनिर्भर नभएसम्म जनताका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन तथा आवश्यकीय सामग्री दक्षिणी तथा उत्तरी छिमेकी देशबाट प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपलब्ध गर्ने रणनिति अपनाउनु आवश्यक छ । विद्यमान परिस्थितिमा उत्तरी नाका खोल्नु आवश्यकै परेकोले खोल्नुपूर्व सुख्खा बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, भन्सार, प्रहरी चौकीजस्ता पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । Tweet प्रतिक्रिया
भारत–बंगलादेश ऐतिहासिक सम्झौताढाका– बंगलादेशको दुईदिने भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार ढाका पुगेलगत्तै दुई देशबीच सीमा सम्झौता ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट' भएको छ। दुवै देशबीचको प्रमुख सम्झौता मानिएको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट'मा दुवै देशको...	सिसा पाइएपछि बजारबाट म्यागी हटाउन आदेशनयाँ दिल्ली– म्यागी चाउचाउमा सिसाको मात्रा फेला परेपछि नेस्लेको तयारी चाउचाउ म्यागी भारतीय बजारबाट हटाउन आदेश दिइएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेस्लेको उत्पादन म्यागी भारतका राज्यले म्यागी बिक्री वितरण नगर्न आदेश...	मोदीमाथि कंग्रेसका योजना नक्कल गरेको आरोपनयाँ दिल्ली– भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मोदी सरकारको भारतलाई औद्योगिक उत्पादन केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षी योजना ‘मेक इन इन्डिया' कंग्रेसद्वारा तयार योजनाको नक्कल भएको आरोप लगाएका छन्।	‘मिसाइल परीक्षण ऐतिहासिक उपलब्धि'सोल– उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले केही दिनअघि आफ्नो देशले गरेको पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न सकिने ब्यालेस्टिक मिसाइलको सफल परीक्षण ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। नेता उनले परीक्षण उत्तर कोरियाको साहसिक कामका...	अवैध प्रवेश रोक्न युरोपेली संघको नयाँ कदमलक्जमबर्ग–युरोपेली संघले भूमध्यसागरमा अफ्रिकी आप्रवासी अवैध तरिकाबाट युरोप पस्न डुंगा चढेर आउँदा बढीरहेका पछिल्ला दुर्घटनासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्याकेज घोषणा गरेको छ।	अमेरिकी कालोसूचीबाट क्युबा हटाइनेवासिङटन– अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले क्युबालाई आतंक प्रायोजन गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउन चालेको पाइलालाई हवानाले प्रशंसा गरेको छ। यसले दुई मुलुकबीच पाँच दशकदेखि चिसिएको सम्बन्ध पुनःस्थापन गर्नेतर्फ मार्ग खोल्ने अपेक्षा...	अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध सुध्रने सं‌केतपानामा नगर– अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा क्युबाली नेता राउल क्यास्ट्रो शुक्रबार अमेरिकी शिखर बैठक ‘समिट अफ दी अमेरिकाज'मा हात मिलाउँदै सँगै बसेका छन्। यसलाई दुई मुलुकबीच दशकौंसम्मको शत्रुता कम...	घट्दो जन्मदरले तनावकोपनहेगन—१३/१४ वर्षका २५ जना डेनिस बालबालिका एउटा कक्षाकोठामा एकत्रित भएर गोलो घेरामा बसेका छन्। उनीहरू त्यहाँ ‘यौन'का बारे छलफल गर्न भेला भएका हुन्।एक छात्रा आफूले लगाएको रातो नङपोलिस नियालिरहेकी छिन्...	विश्व	बहिनीका लागि योग्य वर खोज्दै उत्तरी कोरियाली नेता किमप्योङयाङ–उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन आफ्नी बहिनीको विवाहका लागि योग्य वरको खोजीमा रहेको सार्वजनिक भएको...	मस्तिष्क तेज बनाउन व्यस्त हुनुपर्छबोस्टन-प्रायः व्यस्त भएकोमा तपाईंले गुनासो गर्नुहुन्छ होला तर शोधकर्ताहरूले भने व्यस्त हुनु तपाईंको मस्तिष्कका लागि अति...	ट्रम्पभन्दा हिलारी नै जातीन्युयोर्क– दुई दुष्टमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने छनोटमा आखिरीमा हिलारी नै पर्ने अर्का राष्ट्रपतिका आकांक्षी बर्नी स्यान्डर्सले...	पृथ्वी कति तात्यो ?सन् १८५० ताका औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएपछि पहिलेको तुलनामा पृथ्वीको तापक्रम एक डिग्री बढेको छ ।...	भर्खरै...